Niezaka Nanafina Ny fanaony Mihaino Resaka An-tariby Ny Fitondrana Makedoniana Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2018 7:10 GMT
Lasa anisan'ny fomba fanao ara-politika Makedoniana ny “Fiara mavo” tsy tena izy. Nampiasa azy io tamin'ny sariny ao amin'ny Twitter ny vondrona mpanesoeso “(Tolotra Vahiny), manasongadina ny sariitatr'ireo mpikambana ambony ao amin'ny fitondrana VMRO-DPMNE:Ilija Dimovski, Gjorge Ivanov, Gordana Jankuloska, Nikola Gruevski, ary Sasho Mijalkov.
Tamin'ny taona 2015, nampiseho ny tahiry horonam-peo sy tahirin-kevitra marobe navoakan'ny mpitarika mpanohitra tamin'izany fotoana izany, Zoran Zaev, avy ao amin'ny antoko Sosialy Demokraty (SDSM) fa noraketina mangina ny fifandraisan'ireo olona maherin'ny 20.000 tany Makedonia – anisan'izany ireo mpanao gazety sy mpikatroka fiarahamonim-pirenena maherin'ny 100.
Efa nanambara hatry ny ela ny governemanta teo aloha, notarihin'i Nikola Gruevski sy ny antoko VMRO-DPMNE fa ny sampam-pitsikilovana vahiny no tompon'andraikitra tamin'ny hetsika fanarahamaso faobe tsy ara-dalàna. Tratra ny filazan'izy ireo tamin'ny taona 2015, ary milaza ny vaovao avy amin'ny SPO fa nanao ezaka tsy mahazatra izy ireo mba hanamboatra antontan-taratasy hosoka hanohanana ny filazan'izy ireo.
Ny herinandro lasa teo, nanambara ny SPO fa nahita porofo vaovao izy, izay ahitana ireo manampahefam-panjakana teo aloha nanakarama orinasa vahiny hanamboatra tatitra milaza fa ireo mpiasa vahiny – fa tsy ny governemanta mihitsy – no tompon'andraikitra tamin'ny hetsika fihainoana resaka an-tariby. Nanambara ny fampahalalam-baovao taty aoriana fa avy any Israely ilay orinasa miafina.
Tamin'ny volana septambra 2014, nanambara ny SDSM mpanohitra tamin'izany fotoana izany fa nahazo vaovao tafaporitsaka manaporofo ny fanararaotam-pahefana faobe nataon'ny fitondrana izy ireo. Nangataka tamin'ny governemantan'ny VMRO-DPMNE izy ireo mba hametra-pialana sy hanome ny fepetra hisian'ny fifidianana marina. Nandà ny praiminisitra Nikola Gruevski tamin'izany fotoana izany, ary volana maromaro taty aoriana – tamin'ny febroary 2015 – nanomboka namoaka sombin-dahatsoratra misy ny fihainoan-dresaka an-tariby tafaporitsaka ny Sosialy Demaokraty. Nanimba tanteraka ny fahatokisana ny governemanta ireo ary niteraka onjam-pihetsiketsehan'ny olom-pirenena.
Saingy araka ny fanavaozam-baovao avy amin'ny SPO, izany rehetra izany dia ampahany amin'ny drafitra mba tsy hanomezan-tsiny ny governemanta.
Nilaza ny loharonam-baovao tsy fantatra nampiasain'ny haino aman-jery tsy miankina fa avy any Israely ilay orinasa. Mbola tsy navoaka ny anaran'ilay orinasa, fa nilaza fotsiny ny vaovao fa tsy ny orinasa Israeliana voarohirohy teo aloha tamin'ny kolikoly mifandraika amin'ny fifidianana fitaovana fanarahamaso hafa ho an'ny Ministeran'ny Atitany izany.
Nohamafisina tamin'ny tatitra iray manan-danja avy amin'ny Vaomiera Eoropeana teo aloha, Reinhard Priebe, izay nivoaka tamin'ny Jona 2015 izany, ho ezaky ny Vondrona Eoropeana hanadihady ireo fihainoan-dresaka an-tariby. Nilaza ny tatitra fa “tsara kalitao, ambaratonga sy isa izay azo ekena amin'ny ankapobeny ilay fandraketana izay natao tao amin'ny tranon'ny sampam-pitsikilovam-pirenena.
Nanamarika ny fanadihadiana resaka ara-politika 2016 avy amin'ny tranonkala manamarina ny zava-misy, Truthmeter fa taoriana kelin'ny fotoana, nanakana ny fampiasana ny tantaran'ny tolotra vahiny ny fitondrana:
НАСКОРО: Изложба на олдтајмери на Странски @Sluzbi кои веќе не се во употреба, а своевремено се користеле за #разнебитување на Македонија! pic.twitter.com/aEwoh7udeR
Ги следиме препораките на Град Скопје за #загадувањето. Отсега ќе гледате електрични #жолти комбиња по улиците… pic.twitter.com/vgOOshShNF
Ny sary namboarina manaraka kosa dia manohitra ny fiara mavomavo novaina ho iray amin'ireo liona zarazara hoditra natao tao anatin'ny tetikasa Skopje 2014 mampiadihevitra.